Imithandazo yamaKatolika yomfi Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Las Imithandazo yamaKatolika yomfi Basinceda ukuba sicele ukuphumla okungunaphakade kwemiphefumlo ethathe isigqibo sokuya ezulwini, kuba iyabavumela ukuba bafumane ukukhanya okungunaphakade noxolo. Kweli nqaku siza kukufundisa ngemithandazo malunga nomfi.
1 Imithandazo yamaKatolika yabangasekhoyo, izidalwa ezihambileyo
2 Bathandazelwa ntoni abafileyo?
3 Simele sibathandazele njani abafileyo bethu?
4 Imithandazo eyahlukeneyo yamaKatolika yomfi
4.1 Abazali abaswelekileyo
4.2 Abahlobo abaswelekileyo
4.3 Eyabantwana abaswelekileyo
4.4 Umthandazo wokudlula kothandekayo
Imithandazo yamaKatolika yabangasekhoyo, izidalwa ezihambileyo
Xa siphulukana nomntu esimthandayo, nokuba ngumhlobo, umntu esisebenza naye okanye ilungu losapho elisondeleyo, sifuna ukuba imiphefumlo yabo iphumle ngoxolo, yiyo loo nto Imithandazo yamaKatolika yomfi Benza imiphefumlo yabo inyukele ngasekunene kukaThixo kwaye bafeze uxolo ababengenalo ebomini.
Abantu abaninzi ukuba bathandaze kubo benze uhlobo oluthile lwesiko njengokukhanyisa amakhandlela phambi kweefoto zabo, bezisa iintyatyambo emangcwabeni abo, bakha isibingelelo esincinci egameni labo kwaye ke bayamkhumbula lowo bamthandayo ngelixa bephakamisa imithandazo yabo ukuze ingaphumla ngoxolo.
Inkolo yamaKatolika inesiko lokwenza imithandazo eyahlukeneyo ukuze umphefumlo womfi wayo othembekileyo ufike ezulwini, oko kukuthi, ukwenza i-requiem yemiphefumlo yomfi, oku kuthetha ukuba kwenziwa umthandazo wokuwukhumbula kunokuba uthandaze umphefumlo wawo .
Ukucacisa ngcono ukuba yintoni i-requiem, sinokuthi ngumsitho wenkolo owenzelwa ukuhlonipha ubomi obukhokelwe nguloo mntu. Ngexesha lenkqubo yakho yokuvuka unokuba nobunzima, ucengceleze intetho emfutshane kakhulu malunga nemvakalelo onayo ngalomntu, unike umthandazo wokuphumla kwabo ngonaphakade okanye wenze umculo ngomculo egameni labo.
Bathandazelwa ntoni abafileyo?
Abanye abantu namhlanje bacinga ukuba xa umntu eswelekile abazilungiselelanga umhlaba omtsha ekufuneka bajongane nawo, kwaye ngenxa yoko bafuna i Imithandazo yamaKatolika yomfi, okanye ukuthandazela umphefumlo wakho ukuba ufumane ukuphumla okungapheliyo kwihlabathi elitsha, okanye njengoko abanye besitsho, kolo tshintsho lwendiza.
Emva koko ukufa Umntu omthandayo, abantu abakwinkolo yamaKatolika bahlala bethandaza iintsuku ezilithoba zilandelelana emva kokubhubha kwalowo umthandayo, oku kubizwa ngokuba kumenza unothwal.
Ukunika novenario ongasekhoyo akuncedisi umphefumlo kuphela ukuba ufezekise uxolo kunye nokunyuka kwawo, kodwa kuyanceda ukuzolisa iintliziyo zamalungu osapho ahlala emhlabeni kwaye ke bajongane ngcono nokulila kwentlungu elahlekileyo.
I-novena isivumela ukuba sive ukuba sidibana nomphefumlo womntu esimthandayo osele eye ezulwini. Amanye amakholwa aqinisekisa ukuba emva kokufa ukuhlanjululwa komphefumlo wethu kunamava, kwaye yonke into ayilahlekanga kuba sinokuhlawulela izono zethu emhlabeni.
Simele sibathandazele njani abafileyo bethu?
Zonke Imithandazo yamaKatolika yomfi ukuba sikhuphulele kuThixo kufuneka senziwe ngothando, ukuba zivela emazantsi eentliziyo zethu kuba kulapho sibonisa khona uthando esinalo ngabantu esibathandayo abasele beswelekile. Ukusuka entliziyweni kunye nokholo oluninzi, ucela ukuphumla okungunaphakade kunye nomphefumlo wakhe ukufumana uxolo ngokunyuka kwakhe.
Las Imithandazo yamaKatolika yomfi Benzelwe ukuthandazela abo baphulukana nomntu abamthandayo, ukuze ibazalise ngamandla kwaye boyise le nkqubo, besazi ukuba baya kuhlala ezintliziyweni zabo okoko nje bekhumbula amava ababenawo xa Ebomini bahlala bephila.
Injongo yemithandazo ayikokulibala abo sibathandayo kodwa ukunciphisa iintlungu zethu xa siphulukana, ukongeza kuloo nto umphefumlo womntu oswelekileyo ufumana uxolo noxolo lokunyukela ezulwini kwaye uphumle ethangeni likaThixo uSomandla.
Ukuthandazela bonke abo bangasekhoyo kuye kwenziwa iminyaka emininzi yicawa yamaKrestu, ngenxa yoku abaninzi bakholelwa ukuba abafileyo bakwindawo apho bahlanjululwa khona ukuze bangene ebukumkanini bukaThixo. Kwakhona, ukuba ufuna ukwazi eyona mithandazo ilungileyo, ndwendwela IRosari yomgqibelo womntu oswelekileyo.
Imithandazo eyahlukeneyo yamaKatolika yomfi
Sishiya eminye imithandazo yabantu abangasekhoyo abanokukunceda xa umntu omthandayo ehamba, nantsi ingezantsi:
Owu Thixo wam, wena usiyalele ukuba sibeke abazali bethu, ubenzele inceba nemfesane kwimiphefumlo yabo kwaye ubaxolele izono zabo ukuze banyukele ezulwini kwaye ngenye imini ndingaphinda ndibabone kuvuyo lokukhanya okungunaphakade. Amen
Thixo wam, wena onika uxolelo lwezono kwaye uhlala ufuna usindiso lwabantwana bakho, siyakubongoza ukuba ube nemfesane kubazalwana bethu nakubahlobo abashiye umhlaba wasemhlabeni, ukuze ngokuthethelelwa yiNtombikazi enguMariya kunye nabo bonke abaNgcwele, ukuthatha inxaxheba kulonwabo olungunaphakade. NgoYesu Krestu iNkosi yethu, Amen.
Thixo Somandla, wena uyalwazi usizi lwethu ngokusweleka kwalo mntwana (yitsho igama lakhe), sinike abo kuthi abathobela intando yakho engcwele besentlungwini yokuhamba kwakhe, uxolo nentuthuzelo anokuthi aphile nayo ngonaphakade wena ebuqaqawulini bakho. NgoYesu Krestu iNkosi yethu, Amen.
Kwimeko yokufumana ingozi okanye ukuzibulala H3
Nkosi Thixo, yiva ukubongoza kwabantu abadityaniswe ziinyembezi ezibuhlungu esiziphalazayo ngokusweleka okungalindelekanga komntakwethu / udadewethu (yitsho igama lakhe). Menze afikelele kwinceba yakho, mxolele isono sokuthatha ubomi obumnikile kwaye umvumele ukuba onwabele ukukhanya kwakho okungunaphakade kuloo ndawo apho kungasekho kubandezeleka okanye kufa. NgoYesu Krestu iNkosi yethu, Amen.
Umthandazo wokudlula kothandekayo
Owu Yesu wam, ukuphela kwenduduzo kwiiyure zethu zanaphakade zentlungu kunye nenkxaso ekuphela kwento engenamsebenzi ebangelwa kukushiya ngokwenyama kwabantu esibathandayo. Wena, owakubonayo ukhala kwiintsuku ezibuhlungu izulu, umhlaba nabantu. UYihlo othandekayo, yiba nemfesane ngezinyembezi zethu. Bajonge ngenceba yeNkosi, thomalalisa umphefumlo wethu obuhlungu ngenxa yokulahlekelwa ngulowo wayengumhlobo omkhulu emhlabeni kunye nomKristu onenzondelelo. Siyakucela amandla, umonde, ukuhambelana nothando lwakho ukuze umphefumlo wethu udambe kwaye sikwazi ukudibana nawe ezulwini ukuze sonwabe ngobomi obungunaphakade. Amen